Waxa aad u baahan caching waqtiga inaad soo amaahato lacag
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Waxa aad u baahan caching waqtiga inaad soo amaahato lacag
Sanadihii la soo dhaafay ee mashiinada heshiis saarnayn noqday Mitsukareru si meel kasta oo magaalada, caching codsiga ee uu leeyahay si ay u awoodaan in ay si fudud u badan ka hor.
aan mar kasta oo loo baahdo in la sameeyo nidaamka at miiska, by su'aasha iyo jawaabo oo ka mid ah waraaqaha iyo amarka of dhowr daqiiqo in la cayimay, maxaa yeelay, kuwaas oo dib u eegi doona digtoon ee amaahda. Taas oo uu sheegay
, waayo, dadka ayaa ka fiirsaneysa inay isku dayayaan in ay isticmaalaan markii ugu horeysay ee mashiinada heshiis la saarnayn, nooca waraaqaha loo baahan yahay, waxa kale oo laga yaabaa in aad qabto nooca walwalsan Mana Ogi inay baaritaanka waa la fuliyay in nidaamka.
Sidaas waqtigan, waxaan soo bandhigi doonaa wixii aad u baahan tahay wakhtiga arjiga caching.
dukumenti aqoonsi loo baahan yahay
Haddii aad tahay caching ah macaamilka maaliyadda, iwm, ugu horeeyay ee loo baahan yahay waa waraaqaha aqoonsiga ah.
dukumenti aqoonsi The, waxaa loola jeedaa
ah ? magaca
? taariikhda dhalashada kalsoonaan karo tilmaamay
kaarka aqoonsiga rasmiga ah, waa mid ka mid ah guud ahaan, liisanka darawalnimada ama baasaboor, iwm Waxa ay noqon doontaa sida.
waqtiga codsi kasta, waxaad u baahan tahay mid ka mid ah in uu awoodo in uu kalsoonaan karo loo xaqiijiyo in aysan jirin qalad in macluumaadka.
Intaa waxaa dheer, waraaqaha aqoonsiga looma baahna in ay soo gudbiyaan asalka ah, ee aasaasiga ah si ay daabacaadda iyo soo gudbiyaa nuqulka madow iyo caddaan sida. In liisan darawal
inta badan loo isticmaalo ee, fadlan ogow in waa in aad haysataa nuqul ka mid ah labada dhinac in ay dhacdo this.
kale, waxa loo isticmaali karaa sida waraaqaha aqoonsiga, baasaboor iyo wixii la mid ah.
ma jiro, oo ay dhacay, maxaa yeelay, waxaa suuro gal ah in waxa loo arkaa ah waraaqaha aqoonsiga ka jirin, xaqiijinta ah ee kama dambeysta ah Yaanan ilaawin.
Maxaa loo baahan yahay mararka qaar
In inta badan maaliyadda macaamilka, waxaan codsan caching haddii ay jiraan waraaqaha aqoonsiga iyo shaabadda.
, si kastaba ha ahaatee, iyo haddii amaahdaana shirkadda amaahashada isagoo tiro badan oo ah, in ay dhacdo caching total ka badan xaddi gaar ah, waxa aanu u leeyihiin ugu yaraan loo baahan yahay in ay u kala soocaan caddaynta dakhliga.
xiriirka shahaadada dakhliga, lacag soo amaahday, waa wax ka mid ka mid ah awooda bixinta si ay ula kulmaan la go'aamiyo ka. fall
inta badan waa lacag bixinta iyo warqada ku hayn, in faahfaahinta mushaharka, si uu u caddeeyo in uu yahay dakhliga ah oo deggan, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in aad wada gudbiyaan, sida labadii bilood ee hore.
caching qaar ka mid ah xirfad u tahay, maxaa yeelay waxa ay ku badallano laga yaabaa in af badan xitaa in sida shahaadada dakhliga iyo ogeysiiska canshuurta, oofin doona heshiis siman in aan argagax iyo sii sidoo kale cadaadis habka qandaraas ah shaqooyinka pre-gaar ah oo xirfad u tahay.
ay dhacdo dadka shaqeeya sida milkiilaha keli ah ama warmo a free, caddaynta dakhliga noqon doonaa warbixin go'aanka. Waayo, haddii aad tahay hoos u dhaca ku dhawaaqay
sanadkii hore, aan ka yarayn waa kiiska in amaahda ay adag tahay.
Sababta tani waa in la qeexo line xadka lacagta caching, kuwa guud ee xeerka lacagta.
by sharcigan, amaahashada ka badan saddex-meelood meel ka mid ah dakhliga sanadlaha ah ayaa noqday farsamo oo aan la samayn karaa, waxaan dakhliga noqdo yar tahay sidii baaritaan u ah xasilloonida iyo ma qofeed keli ah waa caching.
Haddii aad ka amaahan badan
la amaahda caadiga ah marka la barbar dhigo, haddii aad saxiixdo caching dheeraad ah, waxaa jira hab si aad u dalbato amaah ah oo la xaqiijiyay hantida maguurtada ah.
guriga ama xafiiska, waa waxa loo isticmaali karo marka ay jirto iyo dalka kale. Caddadka lacagta noqon kartaa amaahda
sidoo kale, marka la eego ku qiimaysaa ah hantida maguurtada ah ay awoodaan in ay isticmaalaan 50% ilaa 70% noqon doonaa. daymaha
collateralized by hantida maguurtada ah, marka lagu daro waraaqaha aqoonsiga shakhsiga ah iyo shahaado dakhliga, waxaad u baahan tahay waraaqo aqoonsi hantida maguurtada ah, sida shahaado of arrimaha diiwaan gashan.
Ka sokow taas, heshiiska ama waxaa looga baahan yahay marka la dalbanayo rahmad, aynu la ogaado in ay lagama maarmaan tahay in ay diyaar u yihiin foomka codsiga noqon.
marka performing caching
, amaahan lacag Waa in aad leedahay waraaqaha dadka macluumaad ka arki kartaa.
sida waraaqaha aqoonsiga, waayo, in, ka dhigi soo gudbinta of aqoonsiga waxaad ka arki kartaa cinwaanka iyo taariikhda dhalashada.
in ay soo gudbiyaan wax kasta oo nuqul, print qayb Let ee dareenka halka diyaariyey si aanay u noqon khafiif ah.
Haddii aad amaahato lacag dheeraad ah oo qaar ka mid ah, in ay dhacdo kala duwan ah caching, waxaa muhiim ah in uu ka tago si ay u diyaariyaan waraaqaha si ay u caddeeyaan dakhliga dheeraadka ah. In the case of dadka sameynaya ganacsi ee shaqsiyaadka
, cashuurta ku soo laabto aad u ogaato sannadkii la soo dhaafay maaliyadeed ee iibka iyo faa'iido looga baahan doonaa sida shahaadada dakhliga.
jiro dakhli joogto ah, ha soo gudbinta uu joogo ayaa caddeyn awooda inay bixiyaan.
Intaa waxaa dheer, Maaliyadda macaamiisha, haddii ay dhacdo in doonayaan in ay ku riday kiro ah lacag isku xidhan, waxaa lagu talinayaa in ay sameeyaan caching ee rahaamad hantida maguurtada ah.
saaray rahmad dhismaha, sida xafiiska ama guriga, amaahda waa suurto gal ama in ama aan la eego la xisaabinayo qiimaha hantida maguurtada ah lagu sameeyo. Documents in la soo gudbiyaa
badan, ilaa baaritaan la dhamaystiro Waa muhiim in la leeyihiin margin waqti.